Filimkii ugu Anshax xumida badnaa Abid oo Muqdisho lagu soo jilay-Daawo muuqaalka - iftineducation.com
Filimkii ugu Anshax xumida badnaa Abid oo Muqdisho lagu soo jilay-Daawo muuqaalka
iftineducation.com – Hadii aad arki jiratay Reer galbeed ama hindi baashaalaaya maanta waa soomaali sarqaantay .Sidana manoo dambeysay.Waligaa ma islaheeyd waxan baa suurtagal noqon kara in ay soomali sameyso.
Waxaa magaalda Muqdisho lagu soo banhigay flimkii ugu horeeyey ee anshax xuma ah kaas oo ay sameeyeen dhalinyaro somali ah oo is fuul fuulaya.
Waa flim Baaashaal farsameesan ah oo la soo bandhigay taas oo culimadii masaajidkana wiilashan dil ku xukuntay kadib markii flimkan ka daareen ama ka shideen shaneemo ku taala xamar weyne oo aflaanta xun xun laga daawado.
Hadaba flimkii oo qeyb kamid ah na soo gaaraya ayaa idiin tafatirnay maadaama ay saxaafada u fiicneen.
DEG DEG: Diyaarad gaar ah oo dhaawacyo ka qaaday Muqdisho..
Qofaa jeclaatay haduu kugu daadiyo sidan uga aarso-Qormo xiiso leh